Black Asian Bear a hụrụ omelet, Facebook na njem nlegharị anya n'anya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Black Asian Bear a hụrụ omelet, Facebook na njem nlegharị anya n'anya
Njem njem • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nwa ojii ojii Khao Yai na -eso imi ya
N'ebe a na -ere nri nke dị na nkume Pha Trom Jai na Khao Yai National Park, vidiyo nke anụ ọhịa bea nke Asia dọtara na aromas nke omelet esi nri apụtala.
Naanị ihe ọ were bụ ka onye jidere anụ ọhịa bea ahụ na vidiyo ka ọ bipute ya na soshal midia iji mee ka ndị njem mee saịtị ahụ ka ọ bụrụ atụmatụ ime njem ụbọchị ha.
Ọtụtụ ndị njem abịarutela na onye isi ogige ahụ ga -amachi ọnụ ọgụgụ dị na mpaghara ahụ n'otu oge.
A maara Khao Yai nke ọma dịka e gosipụtara ya na fim Leonardo Dicaprio, "The Beach".
Ọtụtụ ndị njem na -aga n'ugwu Pha Trom Jai, na ọtụtụ n'ime ha kwuru na ha ahụla akwụkwọ ozi Facebook gbasara anụ ọhịa bea nke Asia nke omelet dọtara n'ebe a na -ere nri na ugwu ahụ, ha makwaara na ugwu ahụ ama ama maka ya. ebe mara mma n'oge udu mmiri, yabụ ha kpebiri ime otu ụbọchị.
Foto nke anụ ọhịa bea nke Eshia gbasara dị ka ọkụ na -agba ọkụ wee bute "Khao Yai Fever," Maazị Adisak Pusitwongsanuyut, onye isi Khao Yai National Park kwuru.
O kwuru na ha mere njem ahụ iji gbochie ndị ọbịa na oke ugwu ahụ mgbe ha hụrụ nnukwu mmụba nke ndị njem na -amasị saịtị ahụ.
Onye isi ahụ na -amachibido ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa na ebe ogige mba ahụ dị ka "Khao Yai Fever" na mgbasa ozi mmekọrịta na -akpali ndị mmadụ ịbanye na ebe nlegharị anya eke na n'ihi mmụba nke ndị mmadụ, na -ewelite nchegbu banyere enwere ike. Ntiwapụ covid19.
N'elu ugwu, ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala ndị ọbịa bụ naanị 30, nke ọgba tum tum ndị ọbịa ruru 50, na nke ndị ọbịa ruo 30 n'otu oge, o kwuru, site na Mọnde ruo Fraịde. Na ngwụsị izu na ezumike ọha, nke na -ahụkarị ka ndị ọbịa na -abata, a na -ekewa oge mmeghe ogige ahụ na oghere 5 nke ndị ọrụ ogige nwere ike ịtụle ma kpebie n'otu oge ọ bụla ụgbọ ala ole a ga -anabata n'ime oghere ọ bụla.
Khao Yai bụ awa ole na ole n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Bangkok ma gosipụta ya na fim "The Beach". N'ụzọ na -akpali mmasị, kpakpando nke "The Beach," Leonardo DiCaprio, gara n'ihu mechaa mee ihe nkiri akpọrọ "Onye Ngosipụta," ihe nkiri banyere otu onye a hapụrụ ka ọ nwụọ mgbe anụ ọhịa bea na -ama jijiji mebiri ya. Ọrụ nke o meriri Oscar mbụ ya dị ka onye na -eme ihe nkiri kacha mma, mgbe ọ zụliterela onyinye onyinye 101 ndị ọzọ site na nhọpụta 252.
Ọhịa a na ala ahịhịa nke Khao yai ogige ọ gbasara puku kilomita abụọ ma mara ya maka kilomita iri ise nke njem mkpagharị na ụzọ ịgba ịnyịnya na ọmarịcha nsụda mmiri.